Magacaabistii, Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe: Saddex aan wada socon ~ Qormadii 26aad | Somaliland Post
Magacaabistii, Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe: Saddex aan wada socon ~ Qormadii 26aad
Sidaa darteed qormadan maantana waxa aynu si gaar ah ugu eegi doonaa dareenkii ay xubnahaas oo ay hormood u ahaayeen wasiir Boobe iyo Xasan Maxamuud ka bixiyeen baadhista Hantidhawrka iyo weliba wixii fal-celis ahaa ee ay ku kaceen si ay baadhistaas u joojiyaan. Run ahaantii inkasta oo ay aad u adagtahay in aan qallinka idiinku sawiro dareenkii dhabta ahaa ee xubnahaasi sida uu maalintaas ahaa iyo tallaabooyinkii kala duwanaa ee ay sida deg degga ah ugu qaadayeen in ay ku hor joogsadaan Hantidhawrka iyo baadhistiisaba. Ayaa hadana waxaan isku deyi doonaa in aan idinla wadaago, isla mar ahaantaana si kooban wax uga tilmaamo dhawr arimood oo aan odhan karo waxay ahaayeen kuwii aniga shakhsiyan iigu layaabka badnaa, marka la eego waxyaabihii kala duwanaa ee iyo falalkii tirada badnaa ee ay xubnahani ku kaceen maalintaas.
Marka hore sidii aan horeba idiinku soo sheegay Hantidhawrku waxay wasaaradda soo galleon xilli salaad hore ah, oo aanay weli shaqada soo gelin madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda intooda badani. Markaa inuu wasaaraddii Hantidhawr soo galay dadka badankoodu waxay ogaadeen goor dambe oo kooxdii Hantidhawrka ahayd xafiisyadii maamulka iyo lacagta ee Tv-ga iyo Idaacadda oo horeba u wada xidhnaa ay midkastaba quful weyn ku sii dul xidheen, albaabkana kaga dhejiyeen waraaq ay ku qorantahay lama furi karo. Taas aawadeed xubnihii masuuliyiinta ka ahaa xafiisyadaasi markii ay arkeen xafiisyadoodii oo uu Hantidhawrku xidhay, waxay naxeen naxdin uu qof bani-Aadam ahi naxo tii ugu xumayd, haba sii kala darnaadaane. Waxaa dhacday in qaarkood saacado dhan laga waayey wax dhaq dhaqaaq ah iyo wax hadal iyo hugun ahba.
Waxa kale ee maalintaa fajaca iyo amakaaga igu riday waxa uu ahaa dareenkii iyo habdhaqankii la yaabka badnaa ee aan ku arkay wasiir Boobe, kaas oo run ahaantii ahaa mid maskaxdayda ku reebay sawir aanay xusuustiisu weligeed guurayn. Waayo waxuu ahaa mid aan waali iyo miyir qab midna lagu sheegi karayn. Waxuu ahaa dareen ay deganaanshihii iyo xasiloonidii oo dhami ka maqan yihiin. Waxuu ahaa dareen iyo habdhaqan masuuliyadda iyo waayeelnimada labadaba ka fog.